>Saung Yun La – The Wait | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရစ် -၂၁ ရာစုသစ်မျိုးဆက် ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
>Mar Mar Aye - The Sword of Our Father
>U Thein Sein introduces welcome back program
>Saung Yun La – The Wait
အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁
မျှော်လေဦးတော့ ကေသီခိုင်ရေလို့ ဆိုရတော့မလားပဲ….
နွေမလည်း မကနိုင် မလှနိုင်ခဲ့တာကြာပြီ
နာရီနဲ့ ရာသီတွေက ကမ္ဘာချီအောင်ကြာခဲ့လေရော့သလား….
ပစ္စုပ္ပန်ညမှာ အနာဂတ်အတွက် အိပ်ရေးဝဝမအိပ်နိုင်ခဲ့တာလည်းကြာပြီ
စာမလာ သတင်းမကြား ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအပျင်းဖျားနေခဲ့ရတာလည်းကြာပြီ
တစုံတယောက်သောသူ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နံနက်ခင်းတခုဟာ
အားလုံးနဲ့ အလုံးစုံတို့ရဲ့ တနေ့တာလုံးဖြစ်ခဲ့သလို
အားလုံးနဲ့ အလုံးစုံတို့ရဲံ ထဘဝစာသာမက
အားလုံးနဲ့ အလုံးစုံတို့ရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်စာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်….
စောင့်နေခဲ့ရတာလည်း ကြာလှပေါ့…။ ။